ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको दादागिरीको नतिजा : सिटिजन र बिओकेका सीइओले मौन रुपमै बैंकर्स संघको बैठक बहिष्कार गर्दै !
ARCHIVE, BANKING, SPECIAL » ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको दादागिरीको नतिजा : सिटिजन र बिओकेका सीइओले मौन रुपमै बैंकर्स संघको बैठक बहिष्कार गर्दै !
काठमाडौँ- आफुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै जस्तो सम्झिएर बजारमा सिन्डिकेट गर्न खोज्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको दादागिरीले सीमा नाघेपछी बैंकर्स संघमा केहि बैंकका सीइओहरु नै जान छोडेको खुलासा भएको छ । समग्र बैंकिङलाई राम्रो गर्ने कुनै एजेन्डा नराख्ने र आफ्नै स्वार्थका कुराहरुमात्र ढुंगानाले बैठकमा राख्न थालेपछि ३ बैंकरहरु बैठकमै जान छाडेको खुलासा भएको हो ।
संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) का शोभनदेव पन्तले ढुंगानाको दादागिरी बढेपछी मौन रुपमै संघको बैठक बहिस्कार गरेको बुझिएको छ । संघमा सिनियरहरु नहुनु र ज्ञानेन्द्र ढुंगानाजस्ता विवादित व्यक्तिले मनपरी ढंगले आफ्नो काम गर्न थालेपछि बैंकरहरु संघ जान छोडेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार ढुंगानाको दादागिरी बढी नै भएपछि अन्य बैंकका प्रतिनिधिपनि संघमा आउन छाड्ने कुरा थियो । तर संचालक समितिको प्रेसरका कारण बैंकका प्रतिनिधिहरु संघको बैठकमा गइरहेका छन् ।
ढुंगानासँग हैसियत नमिलेपछी सिटिजन्स बैंकले ढुंगानाजस्तै विवादित व्यक्तिलाई संघमा पठाउने गरेका छन् । 'गैरकानुनी' काम गरेर कारवाही भोगेका गणेश राज पोखरेल र सुनकाण्डमा मिडियालाई ढाँटेर विवादको चरम उत्कर्षमा पुगेका बोधराज देवकोटा संघको बैठकमा जाने गरेका छन् । विवादित नै विवादित व्यक्ति संगै भएपछी कुरासमेत मिल्ने गरेको छ । यता बैंकिङमा राम्रो छवि बनाएका शोभनदेव पन्त पनि संघको वैठकमा जान छाडेका छन् । उनले संघको वैठकमा डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत श्रवणकुमार मास्केलाई पठाउने गरेका छन् ।
यसरि संघको बैठकमा राम्रा मान्छे आउन छाडेको र गलत काम गर्ने मान्छेहरुमात्र हावी हुन थालेपछि संघको प्रतिष्ठामा निकै आंच आएको छ । यसो त ढुंगाना अध्यक्ष भएदेखि नै संघको कुनै इज्जत नरहेको विश्लेषण जानाकारहरुले गैरहेका छन् ।